महानायक राजेश हमाल आजभोली म्युजिक भिडियोमा ! सार्बजनिक भयो ”साथी” (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
महानायक राजेश हमाल आजभोली म्युजिक भिडियोमा ! सार्बजनिक भयो ”साथी” (भिडियो सहित)
महानायक राजेश हमाल आजभोली म्युजिक भिडियो तिर व्यस्त हुन थालेका छन । उनी अभिनित भिडियोहरुले आजभोली निकै नै चर्चा पाउन थालेका छन ।
प्राय माया पिरती र रोमान्टिक भिडियोमा देखा पर्ने महानायक यसपालि बने अली भिन्न शैलीको भिडियोमा देखा परेका छन ।
चर्चित गायक टंक बुढाथोकीको शब्द संगीत रहेको छ भने उनीसंगै डि एस् ए स्टार २०१९ का बिजेता प्रसुन जङ पोखरेलको स्वर रहेको छ । कालिञ्चोकको मनोरम द्रिश्य समेटिएको गीतमा महानायक हमालले को हो तिम्रो साथी? भन्दै प्रश्न गर्छन् भने गायक तथा अभिनय समेत गरेका प्रसुनले प्रतिउत्तरमा ‘मेरो आमाबुवा मेरो साथी’ भन्न्ने उत्तर दिन्छन ।
गीतलाई समष्टिगत रुपमा एउटा सन्तानको आमाबाबु प्रति कस्तो सोच हुनुपर्छ भन्ने देखाईएको छ ।
यसरी एउटा सन्देशमुलक गीतले सबै उमेर समुहका व्यक्ती र विशेष गरी आज भोलीका गीतमा प्राय हुने माया प्रेमक गीत भन्दा केही फरक भएको महानायक हमाल, गायक बुढाथोकी र प्रसुन लगायत भिडियो निर्माण टिमको भनाइ रहेको छ ।
गीतमा गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकी तथा सन्जिव सुब्बाको एरेन्ज रहेको छ ।
गीतको भिडियोलाई गायक टंक बुढाथोकीको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गएरिएको छ ।